Ini handifi ndakarasikirwa, ini ndinenge ndahwina kana kudzidza. - Nelson Mandela - Quotes Pedia
Handimbofa ndakarasa, ini ndinotunda kana kudzidza. - Nelson Mandela
Paunosangana ne mamiriro muhupenyu hwako, ziva kuti unokunda kana kudzidza, uye haumbokundwa. Ichi chirevo kubva kuna Nelson Mandela umo anoti haatombokundwa hondo, inova fanano yakajeka yemweya wemitambo uri maari.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti iwe unofanirwa kugara wakavhurika pakudzidza uye usambozvidzikisira pachako kunyangwe iwe uchifanira kusangana nekurasikirwa.
Iwe unofanirwa kunzwisisa chokwadi chekuti hupenyu hwese nezvekusangana nematambudziko matsva zuva rega rega uye haufanire kumbotora kurasikirwa sekukanganisa kwako. Pakupera kwezuva, zvese zviri maererano nemaonero ako izvo zvichave zvakakosha.
Iwe une mukana wekunzwisisa kuti hapana munhu akakunda muhondo pakuedza kwekutanga chaiko. Vese vanhu avo vari kubudirira nhasi vakanzwa kakapetwa miriyoni vasati vese vabata mukombe wekubudirira mumaoko avo.
Nenzira imwecheteyo, zvakanaka kunyangwe iwe uri kukundikana usati waigona kuita kuti ive yako, izvo zvinoreva zvakare kuti uri kutora kuyedza kana kuedza nesimba kuti zviite!
Iyi zvirokwazvo poindi yakanaka pachayo uye kana uchinyatsoda kubudirira, ita shuwa kuti unogamuchira kukundwa kwako.
Ziva kuti pane kudzidza mukutadza kwega kwega, uye ndicho chinhu chikuru pane zvese. Iwe unofanirwa kugara wakagadzirira kugamuchira mamiriro ako uye kutora mamiriro ako sezvaanouya.
Panzvimbo yekumhanya kubva kumamiriro ezvinhu, iwe unofanirwa kugadzira pfungwa dzako kuti urwe hondo kusvika kumagumo uye chengetedza mweya yako yakakwira nekuti hausi kuzombokundwa nekuti unogona kana kudzidza kana kukunda.
Unosvika pakuziva zvaunokanganisa, uye izvo zvakakosha zvakanyanya kuti uve nechokwadi chekuti hausi kuzvidzokorora zvakare nguva inotevera.
Kana iwe uchinge warasikirwa, iwe unoziva ese makodhi asina kushanda kuti ugone kuabvisa uye, nekudaro, tarisa pakushanda kunze pamwe nemamwe iwo.
Therefore, the next time you do not win, make sure that you’re still holding a mafungiro akanaka mauri, uye izvo zvichazopedzisira zvichikubatsira iwe kutora mukombe munguva pfupi inotevera.
Ane Masimba Mapfupi
Win kana Kurasikirwa Quotes
Izvo zvinogara zvichiita sezvisingagone kusvika zvaitwa. - Nelson Mandela
Izvo zvinogara zvinoita sezvisingagone kusvika uye kunze kwekunge wagona kuzviita. Tinowanzoramba…
Anokunda muroti uyo asingamboregi. - Nelson Mandela
Tose zvedu tinorota, handizvo here? Chinhu choga chinoita kuti tisiyane nevakakunda ndeichi…
Musoro wakanaka uye nemoyo wakanaka zvinogara zviri mubatanidzwa unotyisa. - Nelson Mandela
Pane akasiyana mamiriro muhupenyu kwatinofanira kushandisa musoro kana moyo kana zvese. Asi…
Dai zvaunosarudza zvaratidza tarisiro yako, kwete zvaunotya. - Nelson Mandela
Sezvatinotsika parwendo rwehupenyu, takatarisana nesarudzo dzakasiyana shure kwaizvozvo dzatinofanira…